Kulankii ugu horeeyay ee xildhibaanada cusub iyo ajendayaasha ugu weyn ee looga hadli doonno – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Kulankii ugu horeeyay ee xildhibaanada cusub iyo ajendayaasha ugu weyn ee looga hadli doonno
Baarlamaanka cusub ee federaalka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ku yeelanaaya kulankiisii ugu horeeyay tan iyo markii markii la dhaariyay.
Baarlamaanka oo ka kooban labada Aqal ayaa ajendayaasha horyaala waxaa ka mid ah, arrimaha doorashada, iyadoo guddi doorasho la magacaabayo doorashada guddoonka baarmaanka iyo madaxweynaha, miisaaniyad seddax biloodle ah oo laga doodayo iyo qodobo kale.
Xildhibaanadaasi ayaa maanta ku shiraya xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho, waxaana si weyn loo adkeeyay ammaanka guud ee agagaarka goobta uu shirka ka dhacaayo.
Guddoomiyaha KMG ee baarlamaanka cusub Cismaan Cilmi Boqorre ayaa sheegay in kulanka maanta ay hor yaalaan arrimo badan oo ay ka mid tahay sidii guddi loogu saari lahaa doorashada guddoonka iyo madaxweynaha, iyadoo guddigaasi ka shaqeyn doono sidii loo diyaarin lahaa doorashada iyo waqtigeeda.
“Sida aad u maqasheenba, waxaa bilaabanaya kulankii ugu horeeyay ee golaha shacabka, waa golihii 10-aad ee Soomaaliya ay yeelato, waxaa inoo bilaabanayaa howlihii doorashada, guddoomiyaha baarlamaanka iyo labadiisa ku xigeen, waxaa laga hadlayaa waxa weeye guddiga doorashada guddoonka baarlamaanka.” Sidaas waxaa yiri Cismaan Cilmi Boqore
Dhinaca kale, xildhibaanada labada Aqal ee baarlamaanka ayaa weli ah mid qabyo, iyadoo aan la dooran weli xildhibaano kasoo jeeda beelaha dega gobolada waqooyi ee Somaliland, waana arrin hor taala baarlamaanka cusub sida loo dhameystiraayo doorashada dalka.